Onu-ala Chain Fatịlaịza Fatịlaịza Igwe na-eweta igwe na andlọ Ọrụ | YiZheng
Na Vetikal Chain Fatịlaịza Crusher bụ otu n'ime ihe ndị kasị nkịtị na ngwá fatịlaịza ụlọ ọrụ. Igwe ahụ na - ejide ike na akwa carbide na - agba ọsọ na - agba ọsọ ọsọ, nke kwesịrị ekwesị maka ịkụda akụrụngwa na nloghachi ihe.
Gịnị bụ Vetikal Chain Fatịlaịza Crusher Machine?
Na Vetikal Chain Fatịlaịza Crusher bụ otu n'ime akacha eji ndinuak akụrụngwa na compound fatịlaịza ụlọ ọrụ. Ọ nwere ike mgbanwe maka ihe nwere nnukwu mmiri na ike na-eri nri na-enweghị igbochi. Ihe a na-abanye site n'ọdụ ụgbọ mmiri na-eri nri ma na-adaba na agbụ na-agba ọsọ ọsọ na ụlọ. Mgbe o gbusịrị, a na-apịkọta ihe ahụ ma gbajie, wee daa na hammerhead mgbe ọ kụsịrị mgbidi dị n'ime ụlọ ahụ. N'ụzọ dị otú a, ọ na-aghọ ntụ ntụ ma ọ bụ ihe dị n'okpuru 3mm ka atara mgbe ọtụtụ nsogbu gasịrị.
Nhazi nke Igwe Vertical Fatịlaịza Crusher Machine
Na usoro ndinuak, na Vetikal Chain Fatịlaịza Crusher jiri synchronous ọsọ nke elu-ike na-eyi na-eguzogide carbide yinye efere, na ezi uche imewe maka uzo mmiri na tinyekwa, nke mere na okokụre ihe onwunwe bụ na edo udi ma na-enweghị nrapado na igwe. Nke a na ụdị crusher ịmụta ọhụrụ technology na elu-edu ígwè, usoro njikarịcha imewe, n'ihi ya, ọ bụ nke nnukwu mkpụrụ na elu pụrụ ịdabere.
Iji Vetikal Chain Fatịlaịza Crusher Machine
LP usoro Vetikal Chain Fatịlaịza Crusher adabara ndinuak nnukwu ihe onwunwe na compound fatịlaịza mmepụta akara, kamakwa ọtụtụ-eji chemical ụlọ ọrụ, ụlọ ihe, Ngwuputa na ndị ọzọ ọrụ.
Uru nke Vetikal Chain Fatịlaịza Crusher Machine
•Vetikal Chain Fatịlaịza Crusher bụ otu nke kehoraizim onu ​​na nkume igwe nri maka etiti size.
•Vetikal Chain Fatịlaịza Crusher nwee usoro dị mfe, yana obere mbara ezi, yana Idozi Mfe.
•Vetikal Chain Fatịlaịza Crusher Igwe nwere ezigbo mmetụta, ọrụ dị mma, ịdị ọcha dị mfe.
•Ọ bụ onye iro nke ọtụtụ ihe siri ike.
Vetikal Chain Fatịlaịza Crusher Machine Ngosiputa Video
Vetikal Chain Fatịlaịza Crusher Machine Model Nhọrọ
Oke Nri Size (mm)
Anuahade urughuru size (mm)
Production ikike (t / h)
Nke gara aga: Ọkara Organic Fatịlaịza Ihe Iji Crusher
Osote: Abụọ-adọ Fatịlaịza Crusher Machine
Okwu Mmalite Gịnị bụ Linear ọma jijiji Screening Machine? Igwe Linear Vibrating Screener (Linear Vibrating Screen) na-eji mkpali moto vibration dị ka isi ọma jijiji iji mee ka ihe ahụ maa jijiji na ihuenyo ma na-aga n'ihu n'ahịrị. The ihe-abata nri ọdụ ụgbọ mmiri nke echetakwa igwe evenly si fe ...
Okwu Mmalite Gịnị bụ Nnukwu Oghere Igwe Akụkụ Akụkụ Ji? Nke a buru ibu nke nwere nnukwu eriri na-adabara maka mbadamba ngwaahịa na-enweghị mmiri na nri, ọrụ ugbo, ọgwụ, ihe ịchọ mma, ụlọ ọrụ kemịkalụ, dịka nri nri, nri oyi, akwụkwọ nri, mkpụrụ osisi, confectionary, chemicals na ndị ọzọ. ..